Nkwado na ọrụ - Jinan Apex Machinery Equipment Co., Ltd.
Ihe eji arụ ụlọ ATC osisi na-arụ ọrụ osisi
1. ọrụ tupu ahịa: ahịa anyị ga-agwa gị ka ị mara ihe ị chọrọ gbasara nkọwapụta cnc router na ụdị ọrụ ị ga-eme, mgbe ahụ, anyị ga-enye gị ngwọta kacha mma.Ka o wee gosi na onye ahịa ọ bụla nweta igwe ha chọrọ n'ezie.
2. ọrụ n'oge mmepụta: anyị ga-eziga foto n'oge mmepụta, otú ndị ahịa nwere ike ịmatakwu nkọwa banyere usoro nke na-eme ka ígwè ọrụ ha na-enye ha aro.
3. ọrụ tupu mbupu: anyị ga-ese foto ma kwenye na ndị ahịa nkọwa nke iwu ha iji zere mmejọ nke igwe na-eme ihe na-ezighị ezi.
4. ọrụ mgbe mbupu: anyị ga-edegara ndị ahịa akwụkwọ na oge mgbe igwe na-apụ, ka ndị ahịa nwee ike ime nkwadebe zuru oke maka igwe.
5. ọrụ mgbe mbata: anyị ga-akwado na ndị ahịa ma ọ bụrụ na igwe dị mma, ma hụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla mapụtara na-efu.
6. ọrụ nkuzi: enwere ụfọdụ akwụkwọ ntuziaka na vidiyo gbasara otu esi eji igwe.Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ahịa nwere ajụjụ ọzọ gbasara ya, anyị nwere ọkachamara ọkachamara iji nyere aka wụnye na kuziere otu esi eji Skype, ịkpọ oku, vidiyo, ozi ma ọ bụ njikwa anya, wdg.
7. ọrụ nke akwụkwọ ikike: anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa 12 maka igwe dum.Ọ bụrụ na mmejọ ọ bụla nke akụkụ igwe n'ime oge ikike, anyị ga-eji dochie ya n'efu.
8. ọrụ na ogologo oge: anyị na-atụ anya na onye ahịa ọ bụla nwere ike iji igwe anyị dị mfe ma nwee obi ụtọ iji ya.Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere nsogbu ọ bụla nke igwe n'ime afọ 3 ma ọ bụ karịa, biko kpọtụrụ anyị n'efu.
1. Gịnị bụ Cnc laser igwe
Site n'ụkpụrụ nke mgbapụta laser, a na-etinye ya na sistemụ ngagharị nke igwe ka laser wee nwee ike hazie ihe ahụ nke ọma.
2. Kedu ụdị igwe laser?
1) Co2 laser: Nkịtị Co2 laser / Mixed Co2 laser (Co2 laser maka metal na nonmetal)
2) Fiber laser ọnwụ igwe
3) Igwe nrịbama: Fiber Laser Marking Machine / Co2 Laser Marking Machine
3. Nhazi isi nke igwe laser (ihe mgbakwunye)
1 tube laser (akụkụ ndị a na-eri eri) + ọkụ ọkụ laser 2 sistemu njikwa 3 tebụl na-arụ ọrụ (okpokoro mma, tebụl mmanụ aṅụ) 4 sistemu mbanye: eriri, bọọlụ bọọlụ (agwakọta Co2 laser ) 5 moto na mbanye (otu ihe na igwe ihe osise) 6 Igwe nlegharị anya atọ. , Otu enyo na-elekwasị anya 7 na-etinye ọkụ na-acha uhie uhie 8 ntuziaka ụgbọ okporo ígwè (nke a na-ahụkarị: XY axis / ngwakọta agwakọta: XYZ axis) + ihe mmịfe 9 OMRON ịgba ọkụ
Nhọrọ: tebụl na-ebuli elu, mgbapụta mmiri (chiller), sistemu mmanu mmanu, onye na-ekpocha ọkụ, ikuku compressor
4. Kedu ihe nhazi ọkọlọtọ anọ nke igwe laser?
Igwe ihe na-ekpochapụ: A na-agbanye anwụrụ ọkụ n'èzí
Igwe ikuku ikuku: ịcha ihe inyeaka, ihe osise inyeaka, na-ebupụ ihe mkpofu
Chiller: Belata okpomọkụ nke tube laser iji hụ na ọ na-arụ ọrụ ogologo oge
Ebe na-acha uhie uhie: Laser adịghị ahụ anya, ya mere jiri red emitter chọpụta ọnọdụ ya
5. Gịnị bụ ndị na-emepụta fiber lasers?
Ụlọ: Raycus UK: GSI, JK laser bụ enyemaka
Germany: IPG United States: ìhè
6. Fiber laser cutter ike
7. Oke ịkpụ oke na igbutu ọsọ nke eriri laser cutter kacha elu
300w carbon ígwè ≤ 3 igwe anaghị agba nchara ≤ 1.2
500W Carbon Steel ≤ 6 igwe anaghị agba nchara ≤ 3
750w carbon ígwè ≤8 igwe anaghị agba nchara ≤4
1000w carbon ígwè ≤ 10 igwe anaghị agba nchara 6
2000w Carbon Steel ≤20 igwe anaghị agba nchara ≤8
8. Co2 laser tube ika
9. Gịnị bụ ike nke CO2 laser tube?
Ike nkịtị bụ 40w, 60w, 80w, 100w, 130w, 150w, 180w, 280w
The ibu na laser tube ike bụ, thicker na ọnwụ ọkpụrụkpụ bụ, na ibu ike bụ, mgbe ịcha otu oké ihe onwunwe , ngwa ngwa ọ bụ bee.The ibu ike bụ , ndị ọzọ ọnụ ngwaahịa bụ.The ibu ike bụ, na-aka njọ ka ihe osise mmetụta bụ.Nnukwu ike dị ukwuu, ka nkwụsi ike ka njọ.60w bụ ike kachasị mma maka ihe osise.
10. Ndụ ọrụ tube laser